Gudoomiye Taabit oo Qorshe Layaab leh La Damacsan Muqdisho iyo Xog Sir ah oo laga helay Akhriso | Allbanaadir News	Gudoomiye Taabit oo Qorshe Layaab leh La Damacsan Muqdisho iyo Xog Sir ah oo laga helay Akhriso
Gudoomiye Taabit oo Qorshe Layaab leh La Damacsan Muqdisho iyo Xog Sir ah oo laga helay Akhriso
Gobolka Banaadir ayaa waxa Maamulkeeda uu ahaa mid isbadel badan ku dhacay oo dhowr siyaasi ay xilka qabteen mid walbana uu ku jaakirayey kuwa ka hooseeya.
Xilligii Tarsan ayaa loo aqoonsaday in Xamar Aheyd Mid Shaqo badan ka jirtay laakiin markii dambe ay noqotay Jaantaa rogan oo xilkaasi ay uga dambeeyeen Muungaab,Yuusuf Madaale iyo Thabit Cabdi oo Hadda Xilka Haya.
2009-Kii Markii uu Duqa Muqdisho Ahaa Eng. C/risaaq Nuune ayaa waxaan xasuustaa in Meelaha qaar dadka Shaqada usineyd oo Qabiil walbo la siin jiray Aqoon iyadoo loo fiirinayey.
Maamulka uu hogaamiyo Thabit Cabdi ayaa lagu tilmaamay qabyaalad mid ku dhisan oo dad badan ay Beel Ahaan Fursadaha Shaqada ku helaan.
Hadda Xog Ay heshay Shabakada Allbanaadir News ayaa tilmaameysa in Thabit Cabdi Maxamed uu Lacag badan ku bixinayo Sameynta Ciidan Gaar ah oo uu yeesho Maamulkiisa si Nabad gelyada Xamar usugaan dhaqaale badana uu ku heli doono Dhisida Ciidankaasi.